Iimpawu zoLwazi lweZifundo zokuBonakala kunye neendlela
Kubafundi nabazali Amacandelo nokuFunda
Ngaba ungomnye walabo bantu abavala amehlo akho ukuba acinge ngendawo ekhoyo apho ushiye khona izitshixo zemoto? Ngaba uvelisa imifanekiso yengqondo xa uzama ukukhumbula into oyenzayo ngoLwesibili owedlule emva kwemini? Uyakhumbula isikhombi seencwadi zonke ozifundileyo? Ngaba unememori okanye iphepha elisondeleyo kwimemori? Emva koko mhlawumbi ungomnye walabo bantu abaneendlela zokufunda ezibonakalayo. Iyiphi indlela yokufunda ebonakalayo?
Funda apha ngezantsi ukuze uphendule!
Yiyiphi i-Visual Learning?
UkuFunda kweZibonelelo ngenye yeendlela ezintathu zokufunda ezahlukeneyo eziphakanyiswe nguNeil D. Fleming kwi-VAK yakhe yokufundisa. Ngokuqhelekileyo, indlela yokufunda ebonakalayo ibonisa ukuba abantu kufuneka babone ulwazi ukuze bafunde, kwaye "ukubonwa" kuthatha iindidi ezininzi kwiindawo zokuqwashisa kwendawo, imemori yezithombe, umbala / ithoni, ukukhanya / ukwahlukana nolunye ulwazi olubonakalayo. Ngokuqhelekileyo, igumbi lokufundela liyindawo enhle kakhulu kumfundi obonakalayo ukuba afunde. Ootitshala basebenzisa ngaphezulu, ibhodi, imifanekiso, iirafu, iimephu kunye nezinye izinto ezibonakalayo ukuze zikhohlise umfundi obonakalayo ngolwazi. Ezi ziindaba ezilungileyo kuwe ukuba le ndlela ufunda ngayo!
Amandla eFundo lokuFunda
Abafundi ababonwayo bahlala benza kakuhle kwiindawo zokufundela zangoku. Emva koko, kukho iziboniso ezininzi kwiiklasi - amabhodi amhlophe, izibonelelo, iifoto kunye nokunye! Aba bafundi banamandla amaninzi anokuphucula ukusebenza kwabo esikolweni.
Nazi ezinye ezimbalwa zamandla alolu hlobo lokufunda:
Ukujonga kakuhle izinto
Unomqondo omkhulu wokulinganisela kunye nokulungelelaniswa
Ngaba ngumququzeleli omkhulu
Unomqondo oqinileyo wombala, kwaye ukhangele umbala kakhulu
Unako ukubona ivesi ukusuka kwincwadi yakhe kwingqondo yakhe
Izaziso ezifanayo kunye nokungafani phakathi kwezinto kunye nabantu ngokulula
Unokubonwa ngokucacileyo umfanekiso
Isicwangciso seZifundo zokuFunda zabaFundi
Ukuba ungumfundi obonakalayo, kwaye unokufumana apha ukuba unemibuzo elula, imibuzo eyishumi, unokufumana ezi zinto zinceda xa uhleli kwiklasi okanye ufundela uvavanyo. Abafundi ababonakalayo badinga izinto phambi kwabo ukuba bancede bazinze ebuseni babo, ngoko ungazami ukuhamba wedwa xa uphulaphule iindibano okanye ufunda kwisithuba sakho esilandelayo !
Iinkcukacha ezongezelelweyo malunga nalezi ngcebiso zokufunda
Ikhowudi yombala amanqaku akho, amagama omagama, iincwadi zezifundo
Qiniseka ukuba ufunde imifanekiso, iimephu kunye nezinye iziboniso ezihamba kunye nesicatshulwa ukukunceda ukhumbule
Yenza ukwenza uluhlu kwi-ajenda
Sifundo sisodwa. Udinga ukubona izinto ukuba uzikhumbule, kwaye rhoqo, ingxolo iza kukuphazamisa.
Thatha amanqaku ngexesha leengxoxo ukuze ufunde ngeendlela zokufunda
Hlala ngasekuqaleni ukuze ukwazi ukubona konke
Sebenzisa iimpawu kunye neemephu zomgaqo-nkqubo ukulungiselela amanqaku akho
Amacandelo okuFunda okuBonakalayo oTitshala
Abafundi bakho abanomxholo wokufunda obonakalayo benza malunga ne-65 ekhulwini kwiklasi lakho. Aba bafundi ngaba yilawa maklasi okufundela ayenzelwe ukufundisa. Baya kubeka ingqalelo kwiilayidi eziphezulu, ibhodi elimhlophe, ibhodi le-Smart, iintetho ze-PowerPoint, izibonelelo, iirafu kunye namashadi.
Ngokuqhelekileyo baya kuthatha amanqaku afanelekileyo kwaye baza kubonakala bebekele ingqalelo ngexesha leklasi. Ukuba usebenzisa ezininzi izikhombisi zomlomo ngaphandle kweengcamango ezibonakalayo, nangona kunjalo, abafundi ababonwayo bangadideka njengoko bekhetha ukufumana into ebhaliweyo ukubhekisela kuyo.
Zama ezi zicwangciso zokufikelela abo bafundi ngokufunda okubonakalayo:
Ukongeza iintetho zomlomo nge-handout, umzobo, okanye ezinye iziboniso
Hlanganisa umbala kwimiboniso yakho, eklasini, nakuzibonelelo
Nika imiyalelo ebhaliweyo kunye nokulindela
Vary ukufunda kwakho kwiklasi ngexesha lokufunda elizimeleyo ukuze abafundi ababonwayo bafumane ulwazi olungcono.
Iindlela zakho zokufundisa (iintetho, umsebenzi weqela, umsebenzi wedwa, iibini, iibhloko) kunye nezikhundla ukwenzela ukuba wonke umfundi uphendwe
Bonisa abafundi bakho ukuba bazalise njani umsebenzi kunokuba baxelele abafundi bakho ukuba bazalise njani umsebenzi.
Bonisa abafundi indlela yokwenza iigama ezilula zegama
Sebenzisa ividiyo kunye nemifanekiso ukuze ukhulise iintetho zakho
Nika ingxelo ebhaliweyo kwizabelo
Iyini Injongo yoMbhali?
Iimpazamo eziqhelekileyo zesiGrike eziya kutshabalalisa amanqaku akho omvavanyo
Yintoni Ukubeka Ikhefu?
Izinto ezi-5 zokwenza Usuku loVavanyo
I-Top 4 Study Music Music Apps ukukhupha namhlanje
Iindlela ezi-5 zokubuyela emva kweNdlela xa Ucinga ngokulahlekelwa ngqalelo xa ufunda
Ziya kuvela nini izikolo ze-PSAT?
Iindlela ezi-4 zokuba luvavanyo olulungileyo-Ukuthatha
Ingcamango ephambili Iphepha lokusebenzela 1 Izimpendulo
4 Izizathu Ezinkulu Zokuba Ukwazi IsiGrike kunye nesiLatini
Ziyiphi Ixesha Elikugqithisileyo: Ngaphambili nangemva koBomi
Umgaqo-nkqubo weNgaphandle weRhulumente wase-US
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: uLavarsi
I-Mole Ratio Inkcazelo kunye nemizekelo
I-Hard Determinism ichazwe
Yiyiphi iza kuqala, i-Melody okanye iNgoma?
Ukufunda kwiSakhono emva
Eyona ndawo iqhelekileyo yeMigodi yaseMntla yaseMntla eMelika
Indlela yokuBhenela ukuKhutshwa kwiKholeji
I-Rap Rap ne-Ghostwriters yabo
Funda i-Conjugations ye "Présenter" (ukuya ku-Present)
I-Liberal Media Bias - Inkcazo
Abantu Abaye Babona Iikholeji Ezinkulu Njengomdlali noMqeqeshi
Isithuthi kwiNguqulelo yezoPhuhliso
Iiporoleji zase-Illinois eziphezulu
Iingcaphuno zoMarha woSuku lwaBasetyhini bamazwe ngamazwe
Ziziphi i-Camel Spiders?
Ubuntu buvaliwe ngexesha loKuvuselela
IWorld World CGI
Ngoobani abaBantu abenza i-Springfield
Imfazwe yaseWalt Whitman
Indlela yokwenza i-Glue engeyiyo idayisi evela eMlonyeni
Akunjalo onke amaHlbri aneMotor Electric and Batteries
Ukudlala njani iD Doror Chord
Inkolelo yamanga: uSormas Crapper wavusa i-Toilet yaseFush
Yintoni i-Black Hole?